FOOD AND DRUG ADMINISTTION ZUNG NIH HRIAL DINGMI DIN-EI PHUN 23 A THANH – VAKOK AUTHAWNG
FOOD AND DRUG ADMINISTTION ZUNG NIH HRIAL DINGMI DIN-EI PHUN 23 A THANH
Theihkauhnak / By vakokauthawng / January 16, 2020 January 16, 2020
Kum 2019, October in December tiangah Myanmar ramchung tirawl le siivai lei zohkhenhtu zung (FDA) nih an hmuhmi din-ei hrial dingmi phun 23 an thanh. Cu hna cuatanglei bantukin an si.
Hong Yuan အမှတ်တံဆိပ် သစ်သီးခြောက်၊ Jui Zhi Chen Pi အမှတ်တံဆိပ် လိမ္မော်ဖတ်ခြောက်၊ Haoyinxiang တံဆိပ် သစ်သီးယို၊ ထူးရှယ်တံဆိပ် အရောင်တင်မှုန့်၊ Delicious Food တံဆိပ် Juice & Jelly ၊ Come cup တံဆိပ် Juice & Jelly ၊ နှင်းနှင်းတံဆိပ် အရောင်တင်မှုန့်၊ အောင်စေရာတံဆိပ် အရောင်တင်မှုန့်၊ ရွှေပုလိပ်တံဆိပ် အရောင်တင်မှုန့် ၊ Milka တံဆိပ် Yogurt Jelly ၊ Jolly တံဆိပ် Jelly (ဝက်ဝံပုံ) ၊ Mountain တံဆိပ် Lime အချိုရည်၊ စပေါ့တံဆိပ် အချိုရည်၊ Fruity တံဆိပ် အချိုရည် (အနီရောင်) ၊ Fruity တံဆိပ် အချိုရည် (အဝါရောင်), Cyclamate သတ်မှတ်ပမာဏထက် ပိုမိုသုံးစွဲထားသည့် အစားအသောက် အမှတ်တံဆိပ်နှင့် အမျိုးအစားများမှာ Hunter တံဆိပ် Jelly (ငါးပုံ)၊ Xingchenshipin တံဆိပ် စပျစ်သီးခြောက်၊ Hong Yuan တံဆိပ် ဇီးသီးယို၊ ASA တံဆိပ် Jelly Egg ၊ Every Day တံဆိပ် Lime Jouice Power ၊ NIPPON တံဆိပ် Energy Power C ၊ HITO တံဆိပ် Tamarind Toffee ၊ Baby တံဆိပ် Passion Juice ၊ Aye Aye Aung တံဆိပ် Preserved Fruits ၊ Lover Plum တံဆိပ် ဇီးသီးခြောက်၊ i Candy တံဆိပ် မာလကာသီးချိုချဉ်၊ ပန်းသီးချိုချဉ်!
Hi hna pawl ahhin cozah nihaonhmi sii an i tel ruangah mipi nih hrial dingin FDA nihathanhmiasi.
“Din-ei le tirawl leachuahtu hna sinah saupi deih dingin cozah nihaonh lomi sii cawh lo dingin kan chimh lengmang ko hna. Asinainazulmi an tlawm. A zul lomi cu tirawl lei phunglam 28 (a) nak bantukin dank an tat hna lai” tiah FDA zung i ṭuanvo ngeitu pakhat nihachim.
Myanmar cu mipi himnakaṭhatlo tuk tikah kan ei-dinmi tirawl le zei dangdang hna zong i ralrin ngaiahau. Cozah nihaonh lomi siiahmangmi le rikhiahmi nithlaaluan cangmiazuarmi an tampi. Cheukhat din-ei cu chuah kum le rikhiah kum zong telh lomi an um. Cu bantuk din-ei le tirawl hna nih zawtnak le damlonakaphunphun an chuahter.